Toban Sababood ee Ugu Caamsan ee Loogu Talo Galay Dhiiga Gulukooska Dhiiga-Wadahadalka Sonkorowga-Sinocare
Toban Sababood ee Ugu Caamsan ee Loogu Talagaley Heerka Gulukoosta Dhiigga
Waqtiga: 2020-02-19 Hits: 156
Qaar ka mid ah bukaannada sokorowga ayaa aad uga walwalsan in, in kastoo shaki la'aan ay sameeyeen dadaallo badan si ay si adag u xakameeyaan cuntada, ay u qaataan dawooyinka ku habboon waqtiga / xaddiga loo baahan yahay oo ay si joogto ah u qaataan jimicsi, heerka sonkorta dhiigga ayaa wali isu beddeleysa sida cimilada guga. Xaqiiqdii, wareejinta heerka gulukooska ee dhiigga waxaa saameeya arrimo badan. Si kastaba ha noqotee, way ku adag tahay bukaannada sokorowga inay raadiyaan sababahooda keligood. Maanta, qodobada qaar u nugul in la iloobo waxaa lagu soo koobay sidan soo socota.
Kahor intaadan aad u xanaaqin, waxaad marka hore hubin kartaa arrimahan si aad u ogaatid sababaha isbeddelada heerka gulukooska dhiigga oo markaa ku siinaya daaweyn astotomatik ah!
Markii cunno badan ama cunno aad u badan la qaato, heerka gulukooska dhiigga ayaa is bedbeddelaya.
Kii hore waa mid la fahmi karo. Marka cuntooyin badan la qaato, walxo badan ayaa si dabiici ah loogu badalaa gulukoos, sidaa darteedna gulukoosta dhiig ee postprandial-ka sareysa ayaa u nugul inay dhacdo.
Ta dambe ma ahan wax laga baqan karo dad badan. Tusaale ahaan, haddii bariis la qaato, gulukoosta dhiigbixinta postprandial-ka ayaa aad u sarreysa, hypoglycemia sidoo kale waxay dhacdaa ka hor dhammaynta cuntada. Haddii qaab dhismeedka cuntada lagu hagaajiyo heer gaar ah (sida ku darista hilibka caatada ah, kordhinta khudradda cagaaran iyo digirta bariiska), gulukoosta dhiigga postprandial-ka ayaa si aad ah loo xakamayn doonaa.
Sidaa darteed, gulukoosta dhiigga ee Postprandial-ka ayaa laga yaabaa inay sare u kacdo kadib markii cunno aad u badan ama cuntada hal aad u badan la qaato.
2. Fuuq bax
Marka dareeraha jirka ka maqan yihiin, gulukoosta dhiigga ayaa kor u kici doonta, maxaa yeelay fiirsashada gulukoosta ee wareegga dhiigga ayaa kacda. Sida caadiga ah, cabitaanka 8 koob oo biyo ah maalintii ayaa ku habboon bukaanka sonkorowga badankood, laakiin biyo badan ayaa wali loo baahan yahay marka bukaanada sokorowgu ay yihiin qaab dhismeedka jirka ama qadar weyn.
Gulukoosta dhiiggu waxay dhibi kartaa dawooyinka qaarkood. Tusaale ahaan, kor u kaca heerka gulukoosta dhiigga waxaa sababa dawooyinka sida hormoonnada, ka hortaga uur-qaadista, qaar ka-hortagga niyad-jabka, dawooyinka lidka-nafsiga iyo qaar ka mid ah dawooyinka diureerka ah.
Sidaa darteed, ka hor maaraynta daroogada cusub, xaaladaha sonkorta dhiigga waa in loo sheegaa, iyo dhakhaatiirta ama farmashiistayaasha waa in lagala tashadaa.
4. Waqtiga Waqtiga
Hyperglycemia ka dib hurdada subixii laga yaabo inay noqoto sonkorow mellitus aroortii ifafaale. 3: 00 ~ 4: 00 subaxnimo, hoormoonka korniinka iyo hormoonnada kale ayaa la siidaayaa si ay u kiciyaan jirka bini aadamka; dareenka bina-aadamka ee insulinta waxaa hoos u dhiga hormoonnadaas si ay u kiciyaan hyperglycemia aroorta.
Si kastaba ha noqotee, haddii insulin xad-dhaaf ah ama daawooyinka xakameynaya gulukoosta dhiigga habeenkii la qaatay ama haddii cunno ku filan la qaato habeenkii hore, hypoglycemia ayaa dhici karta aroorta xigta.
5. wareegga caadada
Gulukoosta dhiigga ee haweenka waxaa laga yaabaa inay isbeddelaan iyadoo ay ugu wacan tahay isbeddelka hoormoonnada xilliga caadada. Sidaa darteed, haddii heerka gulukooska dhiigga ee bukaannada sokorowga dumarka ahi ay si isdaba joog ah ugu kacaan hal toddobaad ka hor caadada, waa in la yareeyaa qadarka karbohaydraytyada, ama laylisyo badan ayaa la qaadanayaa.
6. Hurdo aan ku filnayn
Hurdo aan ku filnayn ayaa kaliya waxyeelaynaysa shucuurta, laakiin waxay sidoo kale dhibaato ku tahay gulukoosta dhiigga. Daraasad Nederland-ka ah, marka la barbar dhigo kuwa hurdada ku filan, xasaasiga insulin ayaa hoos u dhacay 20% markii kaliya 4 saacadood oo hurdo ah loo oggol yahay bukaanka qaba nooca 1 ee sonkorowga mellitus.
Cimilo ba'an (ha ahaato mid haysa ama hawo kulul), xakameynta gulukoosta dhiigga ayaa saameyn doonta.
Xilliga xagaaga, heerka gulukoosta dhiiggu wuxuu ku kici doonaa bukaanka sokorowga qaarkood, laakiin wuxuu u dhici karaa bukaanka kale ee sonkorowga (gaar ahaan kuwa isticmaala insulin). Sidaa darteed, marka cimiladu kulushaho, bukaannada sokorowgu waa inaysan bixi karin, isla markaana isbeddelada heerka sonkorta dhiigga waa in si dhow loola socdo.
Inta lagu gudajiro safarka, dadku waxay si aan macquul aheyn u qaadan karaan cunno badan, cabitaanno waxayna sameyn karaan howlo badan. Heerarka gulukoosta dhiigga ayaa saameeya arrimahan.
Intaa waxaa dheer, shaqada oo la beddelo iyo nasashada waxay khalkhal gelin doontaa jadwalka maamulka, waxay khalkhal galin doontaa habka cuntada / hurdada, waxayna saameyn ku yeelan doontaa xakameynta gulukoosta dhiigga. Sidaa darteed, inta lagu jiro safarka, beddelka heerka gulukooska dhiigga waa in si joogto ah loola socodsiiyaa bukaannada sokorowga.
Caffeine-ka cabitaanku waxay kordhin doonaan waxqabadka aadanaha ee karbohaydraytyada sidaa darteedna waxay sababi kartaa kor u kaca gulukoosta dhiigga ee postprandial. Sida lagu muujiyay daraasado jaamacada American Duke, kadib qaadashada 500 mg kafeyn (oo u dhiganta 3 ~ 5 koob oo qaxwo ah), heerka gulukooska dhiigga ayaa sare u kacay 7.5% maalinki celcelis ahaan bukaanada qaba nooca 2aad ee sonkorowga mellitus.
10. Faahfaahinta cabirka sonkorta dhiigga
Kahor cabirka gulukoosta dhiigga, gacmaha waa in la dhaqo (gaar ahaan ka dib marka cuntada taabato), haddii kale digniin been ah ayaa laga yaabaa in kor loo qaado, sababtoo ah mitirka gulukooska ee hadda waa mid aad u xasaasi ah sonkorta maqaarka ku jirtana waxay sumaynaysaa saamiga dhiigga. Sida lagu muujiyey daraasad gaar ah, qiyaasta qiyaasta gulukoosta dhiigga ayaa ugu yaraan 10% ka sarreysay 88% kaqeybgaleyaasha ka goynaya diirka mooska ama jarjaraya tufaaxa marka loo eego kuwa gacmaha dhaqda. Cabir aan sax ahayn ee gulukooska dhiigga xitaa waxaa sababa lotion iyo kareemka maqaarka.
Bogga Hore: Toddobada Tilmaamood ee ugu habboon ee loo baahan yahay in la sameeyo ka dib marka uu sonkorowgu bukoodo
Bogga Dambe: Maxay tahay inaan fiirogareyno isboortiga?